सकारात्मक सोच पनि बिषाक्त हुन सक्छन्, होस पुर्याउनु पर्ने कुराहरु - उज्यालो पाटो
सकारात्मक सोचको सुरुवात तब सुरु हुन्छ जब तपाईले मान्नु हुन्छ कि संघर्ष गर्ने तपाई एक्लो होइन । जो बाँचेका छन्, उनीहरुको जिन्दगीमा पनि अफ्ठ्यारा छन् र उनीहरुले कुनै कुनै काममा असफल भएर फेरि सुरु गरेका हुन्छन् ।
संसारमा कोही पनि दुख भोग्ने एक्लो हुदैन र जति अध्यारो देखिए पनि सबैको लागि अध्यारो बिचमा पनि बाटो हुन्छ । यहि सामान्य ज्ञानले नै मानिसलाई सहयोग गर्छ । यहि विश्वासले तपाईलाई पनि फेरि उठ्नका लागि र अगाडी बढ्नका लागि सहयोग गर्छ । कतिपय कुरामा आफु एकल प्रयासले मात्रै समाधान निस्किदैन । यस्तोमा पक्कै पनि सहयोग खोज्नु पर्छ तर आफुले आफुलाई विश्वास गर्ने कुरा सकारात्मक सोच हुनु पहिलो आवश्यकता हो । आत्मविश्वास, सकारात्मक दृष्टिकोण र सकारात्मक मनोवृति नै ति कारणहरु हुन् जसले तपाईलाई र तपाईको परिवेशलाई सकारात्मकरुपमा परिवर्तन गर्न सक्छन् । स्टानफोर्ड विश्वविद्यालयमा भएको ताजा अध्ययनले आत्मविश्वास, सकारात्मक दृष्टिकोण र सकारात्मक मनोवृति भएका विद्यार्थीहरुको नतिजा निकै राम्रो भएको देखाएको थियो । हुन त हामी सबैभित्र कतै न कतै सकारात्मक सोचको भावना हुन्छ नै तर सबै कुरामा भने हुदैन । कतिपय समय यस्तो हुन्छ कि जति सकारात्मक हुन खोजे पनि सकिदैन । जीवन फेर्ने मुख्य कुरा नै त्यहि हुन्छ, जब हामी सबै कुराहरुमा सकारात्मक सोच विकाश गर्छौँ ।
सकारात्मक सोच भनेको सबै कुरामा खुसी हुनु मात्रै होइन, तर धेरै मानिसमा यहि भ्रम हुन्छ । वास्तवमा सबै किसिमको भावना हुनु स्वस्थ हुनु हो । दुख मान्नु नै हुदैन भन्ने होइन, निराशा आउदै आउदैन भन्ने नि होइन तर सकारात्मक सोच भनेको जे भइरहेको छ त्यो महसुसलाई स्विकार्नु चै हो । अफ्ठ्यारो परेका बेला अफ्ठ्यारो नै छैन भनेर मान्दैमा त्यो अफ्ठ्यारो हट्ने होइन । सबै भन्दा पहिले अफ्ठ्यारो छ भन्ने स्विकार्नु पर्छ अनि पो समाधान निस्किन्छ । जति अफ्ठ्यारो भए पनि त्यो विचमा आफु खुसी हुन सक्ने कारण पहिल्याउनु सकारात्मक सोच हो अनि त्यसमा पारदर्शी विचार राखेर सहि समाधान खोज्नु चै ठुलो कुरा हो । त्यसो भए त्यस्तो सकारात्मक सोचको विकाश कसरी गर्ने त ? भन्ने प्रश्न दिमागमा आउन सक्छ । यसका लागि असाध्यै गाह्रो पनि हुन्न । यहाँ अफ्ठ्यारो बेलामा पनि कसरी सकारात्मक सोचको विकाश गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बुँदागतरुपमा केहि जानकारीहरु बाढ्न चाहेको छु । पक्कै पनि यी बुँदाहरु सैद्धान्तिक भन्दा पनि व्यवहारिक हुनेछन् र आफ्नो जीवनमा पालन गर्न सकिने हुने छन् ।
१. जान्नुहोस् कि तपाईं आफ्नो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ : माया एन्जलूले एक पटक भनेकी छिन्: “यदि तपाईंलाई केहि मनपर्दैन भने, त्यसलाई परिवर्तन गर्नुहोस् । यदि तपाईं यसलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न भने, त्यो प्रति आफ्नो मनोवृत्ति बदल्नुहोस् । ”
जब तपाईं सकारात्मक सोचको विकाश गर्नुहुन्छ, तब तपाईले विकल्पहरुमा सबै भन्दा उपयोगी मनोवृति छान्न सक्ने बन्नुहुन्छ । तर तपाईं नकारात्मक दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ भने, तपाईंको मस्तिष्कले आफैंलाई नकारात्मक सोच विकास गर्न अनुमति दिन्छ, र, फलस्वरूप, गाह्रो र अँध्यारो भावनाहरू मात्रै तपाईको अगाडी देखिन थाल्छन् । तपाइँ तपाइँको सबै दिनहरू उही कुराको बारेमा चिन्ता वा चिन्तामा बारम्बार खर्च गर्नुहुन्छ, तर समाधान पाउनु हुन्न । वास्तविकतामा, तपाईले गर्न सक्ने पहिलो कुरा आफैलाई शान्त गर्नु हो । यति गर्न सके तपाईं आँधीबेहरीमा पनि उभिन सक्नुहुन्छ र पूर्णतया शान्त महसुस गर्न सक्नुहुन्छ । यदि तपाईं तल झर्नुभयो भने पनि फेरि फिर्ता हुनुहुनेछ । सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण भनेको तपाईको समस्याहरूमाथि शक्ति रहेको बुझ्नु हो । एकचोटि तपाईंले यो बुझ्नुभयो भने, तपाईं आफ्नो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ । कतिपय समस्याहरु केवल आफ्नो दृष्टिकोणका कारण मात्रै पनि भएको हुन सक्छ । यसैले कुनै समस्याहरु समाधानका लागि दृष्टिकोण फेर्नु मात्रै पनि सहि समाधान हुन सक्छ ।
२. जीवनमा तपाईंको अनुपम अर्थ पत्ता लगाउनुहोस् : जब तपाइँ सबैकुरा गुमाउनुहुन्छ, त्यो बेला पनि सकारात्मक सोचले तपाइँलाई तपाइँको उद्देश्य फेला पार्न फेरि बल प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ । यो बाँच्ने र सिक्ने उत्तम तरिका हो । जब तपाईले सकारात्मक सोच राख्नु हुन्छ तब जीवनमा आफ्नो अर्थ थाहा पाउनु हुनेछ । म बेकम्मा भएँ वा यो कुरा म समाधान नै गर्न सक्दिन भन्ने हिनताबोधबाट बाहिर निस्कन सक्नु हुनेछ । तपाईसँग भएका शक्तिलाई पहिचान गर्दै, उत्तम चीजहरू बनाउँनुहोस्, र जब तपाईं अँध्यारोबाट उज्यालोतिर जान चाहानुहुन्छ, सबै कुराले सफलताको लागि नेतृत्व लिन्छ किनभने तपाईमा आइपर्ने समस्याहरु समाधान गर्न तपाई धेरै हदसम्म सबल भएको हुनुहुन्छ । तपाईंसँग जहिले पनि यी कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, तर यसका लागि सँधै सकारात्मक सोच भने बोक्नु पर्ने छ ।
३. आफु जे हो, त्यहि बन्नुहोस् : यसको अर्थ हो, तपाईले आफ्नो सक्षमता र असफलताका बारेमा स्वबोध हुनु पर्छ । तपाईले जान्नु पर्छ कि तपाई वास्तवमा के गर्न सक्नु हुन्छ र के गर्न सक्नु हुन्न अनि तपाई आफ्नो क्षमता र कमजोरीलाई स्विकार्दै आफु जस्तो हो, त्यस्तै बन्नु पर्छ । अर्थात, आफुमा भए भन्दा बढि देखाउने वा आफ्नो सक्षमतालाई कम आँक्ने हुनुहुदैन । यसो गर्दा आफुमा भएको सामर्थ्य आडम्बर र हिनताबोधका रुपमा अनावश्यक खर्च हुन पाउदैन । नक्कली कुरा गर्नु पर्दैन । यसले गर्दा समयको सहि आँकलन हुन सक्छ र त्यसमा पारदर्शी विचार राख्न सकिन्छ । जसले गर्दा आफुमा सकारात्मक सोच रोप्न सकिन्छ ।
४. आफुलाई माया गर्नुहोस् : जीवनमा आफ्नो लागि सबै भन्दा महत्वपुर्ण साथी भनेकै आफु हो । यसैले आफ्नो लागि समय छुट्याउने, आफ्नो विचार राम्रो बनाउन बौद्धिक खुराकहरु पढ्ने वा हेर्ने लगायतका कामहरु अति नै आवश्यक हुन्छ । तर अहिलेको समयमा आफुलाई माया गर्नु पनि सजिलो कुरा छैन । अवस्थाहरु यस्तो आउँछन् कि दुखको कारण स्वयम् आफु हो भन्ने सोचिन्छ र आफुले विगतमा गरेका निर्णय वा छनौटका कारण आफै प्रति दिक्क लागेर आउँछ । सकारात्मक सोचका लागि यो सोचाइ असाध्यै हानिकारक हुन्छ । आफु प्रतिको घृणाभाव वा नकारात्मक सोचले जीवनमा हुने वृदिविकाशमा मात्र होइन, दृष्टिकोण र स्वास्थ्यमा पनि फरक पर्छ । यी सबै कुराबाट बच्नका लागि आफुलाई माया गर्न जरुरी छ ।
५. बिषाक्त सकारात्मक सोचलाई हटाउनुहोस् : मैले माथि भने झैँ सकारात्मक सोच हुनुको अर्थ जति बेलै खुसी हुनु र जीवनका दुख वा अफ्ठ्याराहरुलाई बिल्कुलै ध्यान नदिनु होइन । यदि यहि सोचाइलाई नै सकारात्मक सोच मानिन्छ भने यसले समाधान दिदैन र झन् अफ्ठ्यारो अवस्थामा पुगिन्छ किनभने अवस्था यति जटिल भइसक्छ कि हाम्रो पहलकदमी त्यसका लागि अपुग भइसक्छ । यस्तो किसिमको सकारात्मक सोच यहि कारओ बिषाक्त हुन सक्छ । भावनाहरू सकारात्मकताका अंश हुन् । तपाईं आफ्ना भावनाहरूसँग बस्न चाहनुहुन्छ, उनीहरूलाई चिन्नुहोस्, र तिनीहरूलाई आवाज दिनुहोस् । आफैलाई अगाडि बढ्न भन्नुको सट्टा, तपाईका भावनाहरूलाई सफलतामा पुर्‍याउनुहोस् जसले तपाईंलाई जीवनमा परिवर्तनहरूसँग सामना गर्न मद्दत गर्दछ ।
अन्तिम विचारहरु : तपाईं हरेक दिनको हरेक सेकेन्ड सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण विकास गर्न चाहनुहुन्न । कुनै बेला यस्तो हुन्छ कि सबै कुरा बिर्सिएर दुखमा हराउँ, तर त्यसो भए पनि, सकरात्मकताको शक्तिलाई मान्यता दिनाले तपाईंको दिनहरू अझ राम्रो हुनेछ र तपाईंलाई आफ्नो परीक्षाहरूमा आफुलाई अब्बल भेट्नुहुनेछ ।